Ukushisa komhlaba kuzokhuphula amazinga okushisa aseColombia ngo-2,4 ° C | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kubangela ukuba amazinga okushisa aphakathi komhlaba akhule. Yize lokhu kwanda kungenzeki kuzo zonke izindawo zomhlaba ngamandla afanayo.
EColombia i Okwesithathu Ezokuxhumana Kuzwelonke Ekuguqukeni Kwesimo Sezulu, umbiko oveza izimo ezinemininingwane eminingi ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu kuzo zonke izingxenye zezwe eminyakeni eyikhulu ezayo. Lokhu kukhuphuka kwezinga lokushisa kuzowathinta kanjani amazwe?
1 Khuphuka emazingeni okushisa omhlaba
2 Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu
Khuphuka emazingeni okushisa omhlaba
Phakathi kwezambulo ezishaqisa kakhulu ukuthi ngasekupheleni kwekhulu leminyaka izinga lokushisa eColombia lingakhuphuka cishe ngo-2,4 ° C, isimo esingaholela ekuncibilikeni okucacile kwezintaba ezigqunywe yiqhwa nezinguzunga zeqhwa, ukwanda kwezinga lolwandle, ukwehla ukukhiqizwa kwezolimo, ukwanda kwenhlabathi eyihlane kanye nokuwohloka kwezimo zezulu ezimbi kakhulu.
Phakathi kwesikhathi sika-1971 no-2015 amazinga okushisa aphakathi nendawo IColombia inyuke ngo-0,8 ° C , ngokuba yizinga lokushisa elijwayelekile laseColombia 22,2 ° C. Ekupheleni kwekhulu leminyaka izinga lokushisa kwezwe lizokhuphuka ngo-2,4 ° C.
Cishe bonke omasipala baseColombia basengozini enkulu ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa.
Umbiko ukhombisa yonke imithombo enesibopho sokukhishwa okuphezulu kakhulu kwamagesi abamba ukushisa emkhathini. U-59% wokukhishwa uvela eminyangweni eyishumi (i-Antioquia, iMeta, iCaquetá, iValle del Cauca, iSantander, iCundinamarca, iCasanare, iBoyacá, iGuaviare neBogotá), kanti imikhakha leyo ekhipha kakhulu ezolimo, ngenxa yezinguquko ukusetshenziswa komhlaba ngama-62% kanye nezokuthutha nokukhiqiza nge-11% lilinye.
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu
Ukuze kusungulwe izinqubomgomo ezenziwayo kanye nokuzivumelanisa nokuguquguquka kwesimo sezulu, lo mbiko uveza imiphumela ezoba nayo esikhathini esizayo.
IColombia ezingeni lomhlaba wonke yi obhekene nokukhishwa okungu-0,42% emhlabeni, isimo esisibeka njengama-40 emhlabeni (emazweni ayi-184) nasendaweni yesihlanu eLatin America (emazweni angama-32).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukushisa komhlaba kuzokhuphula izinga lokushisa laseColombia ngo-2,4 ° C
IMexico iyaqhubeka nokuzamazama ngomunye ukuzamazama komhlaba okunamandla